Taariikhdii Madaxweyne Maxamed Siyaad Barre – The official Somali Historical
Taariikhdii Madaxweyne Maxamed Siyaad Barre
1-Xasan Barre Cabdulle oo lagu dilay dagaalkii ba’naa ee Qaranro-Balo oo dhex maray dh/dhaqaaqii Daraawiish iyo xoogaggii ka soo horjeeday,wuxuuna ahaa Darwiish.
2-Muuse Barre Cabdulle waxaa lagu dilay dagaalladii Daraawiish,isagoo Darwiish ah.
3-Xirsi Barre Cabdulle waxaa lagu dilay dagaalkii Talyaanigu ku qabsaday Itoobiya 1936 isagoo ah askari Talyaani.
4-Siyaad Barre Cabdulle waxaa lagu dilay Mirrig abbaartii 1926 wuxuuna ka mid ahaa kacdoonkii Fallaago oo ka horyimid gumeystaha Talyaaniga.
5-Faarax-Madow Barre Cabdulle waxaa lagu dilay degaanka Wardheer isagoo socoto ah,waxaana loo dilay dakane qabiil.
6-Max’uud Barre Cabdulle wuxuu ku dhintay dhulka GEDO tii allaana u timid.
7-Jaamac Barre Cabdulle tii allaa u timid,wuxuuna dhintay abbaartii 1938dii isagaana ugu dambeeyay ilma Barre.
M S Barre wuxuu ku dhashay sida loo badan yahay aagga Laas Gacal oo ka mida degaanka loo yaqaan Ceel Gaab oo maanta ka tirsan degmada Shilaabo ee Kiilka Shanaad ee Itoobiya. Wuxuuna dhashay abbaartii 1915/1916.
Anigaan erayadaan qoraya, waxaan ku dhashay qiyaastii meel u jirta Shilaabo 10 KM, haddana waxaa ii diiiwaan gashay inaan ku dhashay degmada Dhuusamareeb, waayo waxaa laga baqayey in aan dugsiga la ii oggolaan anoo aan Jumhuuriyadda ku dhalan awgeed…isla sidaas si u eg baa laga yaabaa in J/lle M S Barre loo diiwaan gashay inuu ku dhashay Gedo.
Arrintaan godobteeda waxaa leh gumeystihii dagallada S/liyeed kala qoqobay oo geyeensiiyay beelihii reer guuraaga ahaa khalal nololeed.
Si kastaba ha ahaatee, hooyadi Shaqlan Warfaa Maxammad waxaa aabbihii ka dumaalay adeerki Xasan Barre ,iyadoo laba gabdhood oo hal hameyn Abris ku dilay waa dambe dhulka Gedo u leh.
Waxaa kale oo hooyadi aabbihi u dihatay laba gabdhood oo kale ah, Faadumo Siyaad Barre oo u dad dhashay Cali Dhoorre Muuse iyo Xaliimo Siyaad Barre oo dad dhashay Cali-Nuur Aadan Sanyare iyo Aw Cali Cumar.Waxaa kaloo la dhashay laba gabdhood oo kale ah,Fadumo Siyaad Barre oo dad dhashay Faarax Max’d Ciise-Gurey iyo Xaliimo Siyaad Barre oo dad dhashay Jaamac Xirsi.
Gabdhaha la dhashay M Siyaad lababa waa isku magac.
Markii la jabiyey dh/dhaqaaqii gunnima diidka ahaa ee Daraawiisheed oo jifada M S Barre ee reer Kooshin Ugaas Diini badi ku tirantay iyadoo Daraawiish la safnayd iyo waliba in kaloo tira badan oo tokiisa Mareexaan ah,kuna dhinteen Daraawiish rag reer Barre ah ayaa qoyskii Siyaad Barre iyo qoysas kaleba u qaxeen dhulka Gedo oo markaas carro nabadeeda, waagaasna dhabarkaa lagu siday Max’d.
Hooyadina waxay dhimatay isagoo wali cunug aan weynaan ah.
Aabbihi ayaa dib ugu soo noqday dhulkay hore uga guureen,wuxuuna soo gaaray qeybo ku harsanaa oo reer Barre Cabdulle ah. Wuxuu la kulmay kacdoonkii Fallaago oo uu hoggaaminayey Naa’ib Cumar Samatar, wuuna ku biiray kacdoonkaas.
Markii Siyaad la dilay oo Max’d wali wiil yar yahay ayaa adeerki Jaamac Barre dib ilma Siyaad ugu soo ceshay dhulkii Doh, Ceel Gaab iyo G/gaduud oo ay hore u dagi jireen. Dhulkaan baa Max’d ku qaan gaaray ,wuxuuna ka qortay askarta Talyaaniga Baladweyn 1936dii,wuxuuna ka mid noqday “Corpo Zaptie, Polizia Africana Italiana”.Wuxuuna galay dagaalkii Talyaaniga iyo Itoobiya.
1-Faadumo Aw Muuse Fiqi oo u dhashay; Shamhaad M Siyaad, GS Cali M Siyaad (Shigshigow) iyo GS Shire M Siyaad.
2-Khadiijo Macallin Ismaaciil oo u dhashay; SG Maslax M Siyaad, GS Xasan M Barre (Rubeeti), Dr. Cabdullaahi M Siyaad, Canab M Siyaad iyo Cosob M Siyaad.
3-Falxado Gurrac oo u dhashay Faadumo M Siyaad.
4-Maryan Xasan oo u dhashay Suuban M Siyaad.
5-Dalaayad Xaaji Xaashi Jaamac-Gari oo u dhashay; Guuleed M Siyaad, Diiriye M Siyaad, Ayaanle M Siyaad, Xaawo-Luul M Siyaad, Deeqo M Siyaad, Shamso M Siyaad, Ijaabo M Siyaad, Haweeya M Siyaad, Hodan M Siyaad iyo Ladan M Siyaad.
6-Waxaa jirtay marwo kale oo u dhaxday J/lle Siyaad oo magaceeda lagu sheegay Khadiijo Ibraahim Ciise Cabdi oo waayihii dambe ee uu GEDO ku sugnaa uu guursaday,waxna isuma aysan dhalin.
Max’d Siyaad Barre awoowgi Barre Cabdulle Yuusuf waxaa lagu dilay dagaalladii sokeeye isagoo madi ah.Wuxuu markaas ifka uga tagay 7 nin oo kala ahaa: 1-Xasan Barre Cabdulle oo lagu dilay dagaalkii ba’naa ee Qaranro-Balo oo dhex maray dh/dhaqaaqii Daraawiish iyo xoogaggii ka soo horjeeday,wuxuuna ahaa Darwiish. 2-Muuse Barre Cabdulle waxaa lagu dilay dagaalladii Daraawiish,isagoo Darwiish ah. 3-Xirsi Barre Cabdulle waxaa lagu dilay dagaalkii Talyaanigu ku qabsaday Itoobiya 1936 isagoo ah askari Talyaani. 4-Siyaad Barre Cabdulle waxaa lagu dilay Mirrig abbaartii 1926 wuxuuna ka mid ahaa kacdoonkii Fallaago oo ka horyimid gumeystaha Talyaaniga. 5-Faarax-Madow Barre Cabdulle waxaa lagu dilay degaanka Wardheer&hellip;
Previous: Wariye Abwaan Cabdala Nuurdiin Axmed oo Muqdisho ku geeriyooday
Next: Ismail Omar Guelleh